Ogaden News Agency (ONA) – Shir xasaasi ah oo looga arinsanayo arrimaha Geesk Afrika ayaa ka furmi doona Washington DC
Shir xasaasi ah oo looga arinsanayo arrimaha Geesk Afrika ayaa ka furmi doona Washington DC
Posted by ONA Admin	/ September 5, 2011
Shir xasaasi ah oo diirada lagu saarayo arrimaha Geeska Afrika ayaa qaybtiisa kowaad lagu qaban doonaa malinta Arbacada ee bishu tahay 07/09/2011 magaalada Washington DC.
Shirkan oo ay kasoo qayb gali doonaan madax ka kala socota labada aqal ee looga arimiyo dalka Maraykanka ayaa sidoo kale waxaa ku wehilin doona Saraakiil sare oo ka socota wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka. Waxaa kaloo kasoo qaybgali doona aqoon yahano khibrad dururgsan u leh arrimaha cakiran ee Geeska Afrika.
Shirka waxaa si wada jir ah usoo qaban qaabiyay Machadyada kala ah :
1-	Wilson International Center
2-	The Alliance for Peacebuilding
3-	Institute for Horn of Africa Studies and Affairs
Wilson International Center waa urur caalami ah oo dhex-dhexaad ah arimaha caalamkana ku soo dhex jiray 43 sano. Wuxuu ku caan noqday inuu horumariyo fikradihii Madaxwene Welson si la’isgu xidho afkaaraha wanaagsan ee la aaminsan yahay iyo siyaasada caamka ah, si wax looga qabto arimaha jooga iyo mustaqbalka aynu hiigsanayno.
Waa Xarun dunida qadarin ku leh oo arimaha hoose ee Washington una dhuun-duleela oo lagu amaano fikrado iyo halabuur caafimaad qaba oo dhex-dhexaad ah.
Ururka Alliance for Peacebuilding (AfP) ayaa ah is-bahaysi kulmiya ururo kala duwan iyo khubaro aqoon leh oo ka wada shaqeeya sidii looga hirgalin lahaa dunida dacaladeeda nabadgalyo waarta oo shaqayn karta.
Machadka IHASA (Institute for Horn of Africa Studies and Affairs) ayaan akhristaha ku cusbeyn oo marar badan ka soo shaqeeyay shirar caalami ah oo lagaga hadlayo arimaha Geeska Afrika gaar ahaan Ogadenya. Machadka IHASA wuxuu ku dadaalaa siduu u horumarin lahaa nabdda, cadaaladda, sinaanta iyo horumarka wuxuuna ka shaqeeyaa sidii loo abuuri lahaa dawlad hagaagsan iyo in la yareeyo dagaalada iyo xurgufaha joogtada ah ee gobolkaa dhibaateeyay.
Barnaamijka iyo ajendaha shirka ayaa sidan u dhici doona;
WEBS OF CONFLICT AND PATHWAYS TO PEACE
TOWARDS A REGIONAL STRATEGY
9:00AM-1:00PM IN THE 5TH FLOOR CONFERENCE ROOM
9:00am-11:00am	PANEL ONE: PRESENTATION AND RESPONSE TO HORN OF AFRICA CONFLICT MAPPING DOCUMENT
Michael Van Dusen, Vice President, Woodrow Wilson International Center for Scholars
Melanie Greenberg, President and CEO of the Alliance for Peacebuilding
Hamse Warfa, President, Institute for the Horn of Africa Studies and Affairs (IHASA)
Steve McDonald, Director of the Africa Program and the Project on Leadership and Building State Capacity, Woodrow Wilson International Center for Scholars
9:20am-9:40am	Presentation of the Conflict Mapping Paper
Paul Williams, Associate Professor of International Affairs and Associate Director of the Security Policy Studies Program, George Washington University
9:40am-9:50am	Response from United States Policy Perspective
Deborah Malac, Director, Office of East African Affairs, US Department of State
9:50am-10:00am	Response from European Union Policy Perspective
François Rivasseau, Minister-Counselor, Deputy Head of Delegation, Delegation of the European Union to the USA
10:00am-10:10am	Response from an African Policy Perspective
Amir Osman, Senior Policy Analyst, Open Society Institute (Invited)
10:10am-11:00am	Question & Answer Session
11:00am-11:10am	Coffee Break
11:10am-1:00pm	PANEL TWO: A PROPOSED US REGIONAL STRATEGY TOWARDS THE HORN OF AFRICA
11:10am-11:20am	Introduction of Panelists
Chic Dambach, Chief of Staff, Congressman John Garamendi
11:20am-11:35am	Conflict Resolution at Local and Regional Levels
David Shinn, Former Ambassador to Burkina Faso and Ethiopia, and Adjunct Professor at George Washington University
11:35am-11:50am	Governance Reform
Alan Goulty, Senior Scholar, Woodrow Wilson International Center for Scholars
11:50am-12:05pm	Food Security
Julie Howard, Food for Security, United States Agency for International Development
12:05pm-12:20pm	Economic Integration
Bernard Harborne, Conflict Advisor, World Bank
12:20pm-1:00pm	Question & Answer Session